३६ मेगावाट सौर्य विद्युतको पिपिए गर्दै प्राधिकरण - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
३६ मेगावाट सौर्य विद्युतको पिपिए गर्दै प्राधिकरण
जेठ ३१, २०७५ 2995 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने ३६ मेगावाट सौर्य विद्युतको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा ४ कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युतको पिपिए गर्ने तयारी गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत विकास सम्बन्धि कार्यविधि २०७४’ ले तोकेको प्रति युनिट ७.३० रुपैयाँ दरमा प्रसारण सम्झौता भएका कम्पनीको पिपिए हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणको आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यविधी कार्यान्वयनको प्रस्ताव लगिने भएको छ ।
कार्यान्वयन प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि तनहुँ, धनुषा, दाङ र कैलाली जिल्लामा जडान हुने सौर्य विद्युतको पिपिए हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ४ निजी कम्पनीले तनहुँमा ५, धनुषामा १०, दाङमा २० मेगावाट र कैलालीमा १ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न अनुमति लिएका छन् ।
सोलार फार्म, इको फार्म, कन्ट्री डेभलपमेन्ट र ग्रीन इलेक्ट्रीसिटी नेपालले क्रमशः ४, १०, २० र १ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरेर प्राधिकरणको प्रणालीमा विद्युत उपलब्ध गराउने छन् । विद्युतको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा जाने सरकारको अवधारणा अनुसार प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद गर्नेछ ।
यसअघि ९ कम्पनीसँगको ६१ मेगावाट सौर्य विद्युतको पिपिए प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको थियो । मन्त्रालयले कार्यविधी अनुसार पिपिए गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि पूरानो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
नयाँ कार्यविधिमा सोलारबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ तोकिएको छ ।